Markuu waxyi ku kaco meesha ugu hooseysa ee xirfadda faneed | Abuurista khadka tooska ah
El wadada fanka aad ayey u adagtahay mana jiraan wax farshaxanno yari ah oo ay tahay inay maraan godad biyo fadhi si ay ula soo baxaan tamar badan. Iskuulo yar ayaa ka digaya tan qaar badanna waxay u arkaan xaqiiqda qallafsan markay dhammeeyaan 3 sano ee waxbarashadooda si ay u ogaadaan inay iyagu ku tiirsan yihiin naftooda inay sii wadaan.
Peng Ven Wong waa farshaxaniste ay qasab ku noqotay tan ku dhex arag jidhkooda si aad u ogaato in daqiiqadahaas mugdiga ah uu awood u yeeshay inuu abuuro 36 majaajillo ah oo ku saabsan barafka barafka leh ee caanka ku leh shabakadaha shabakadaha.
Waa isla kii yidhi fanaaniinta oo dhami waxay ku hamiyaan inay awoodaan inay wax abuuraan qof walba cagihiisa mar ayuu ku dhacaa. Waxay ahayd si hufan xilligiisii ​​ugu lumay ama ugu hooseeyay, markii uu u waxyooday CubeMelt isaga u yimid, gabal baraf ah oo sheekooyin badan sheegaya.
Ku lumay meeshii uu ku jiray xirfad ahaan, markuu jiray 36 runti ma uusan aqoonin sida loo aasaaso xirfaddiisa. Waxay ahayd daqiiqadahaas shaki badan oo jira, markii uu dareemay in noloshiisu u dhalaalayso sidii inay yihiin baraf ku jira koob cabitaan ah.
Sidaa awgeed shaki ayaa soo ifbaxay waxa ku saabsan waxa ay yeeli doonto barafka cimrigiisa gaaban. Waxay ahayd xilligii uu dhashay CubeMelt. Baraf baraf wata oo qalbigiisu weyn yahay oo wax walba ay ku fiicnaayeen iyo dabeecaddaas in wax walba la qaban karo.
Falsafada ah in noloshu gaaban tahay, wuxuu bilaabay taxane majaajillo ah ilaa laga gaarayo 33 oo aad bilowdid inaad kasbato dareenka kumanaan qof oo adduunka ah. Waxaad ka mid noqon kartaa iyaga oo ka soo jeeda Instagram ama boggaaga Facebook si aad ula socoto xiisaha xiisaha leh ee CubeMelt.
Waxaan kaa tagaynaa adiga nolosha naqshadeeye 13 GIFs.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Abuuritaanka majaajillo majaajilo ah barta ugu hooseysa ee xirfadda hal-abuurka farshaxanka